डेनमार्कको सडकमा घन्कियो देउसी र भैलो
अक्टोबर २५, २०१४
पूर्ण बन्धन / कोपनहेगन, डेनमार्क डेनमार्कको सडकमा नेपालीको देउसी र भैलो घन्किएको छा । त्यहाँका नेपालीले डेनिस नागरिकहरुलाईसमेत नेपालको यो प्रचलन र पर्वमा परिचय गराउँदै सडकमा देउसी भैलो घन्काएका हुन् । देउसीभैली स्ट्रीट फेस्टिवल २०१४ ले यो...
संस्मरण : उधारो भाइटिका
अक्टोबर २२, २०१४
बस्नेत सागर हामि तीनजना दाजुभाई लगालग जन्मेका हौँ । शुरुमा दाजु जन्मिदा स्वाभाविकै परिवारजन खुसि हुनुभयो । ममीले बताए अनुसार बुबाममिले म जन्मिनेबेलामा यो चै छोरी होस् अनि अरु नपाउने भनेर सल्लाह गर्नुभयो । तर म पनि...
थारुहरुको महाधिबेशन भन्दा झाँकीको चासो
अक्टोबर १९, २०१४
थारु कल्याणकारिणी सभाको २१ औं महाधिवेशनको नारा ‘थारुहरु एक हौं’ भन्ने । थारुवानका अनुसार अब बन्ने नयाँ संविधानमा थारुका हक, अधिकार सुनिश्चित गराउन सबैजना एक हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता उमाकान्त चौधरीले थारुहरुलाई मधेसी र जनाजति...
पेरिसको देउसी भैलोमा चुले निम्ता !
अक्टोबर १७, २०१४
पेरिसमा यो वर्ष एकै ठाउँमा देउसी भैली खेलिँदै छ । बिदेशमा नेपालमा झैं मादल ठोक्दै राति राति देउसी भैलो भट्याउन पाइन्न । कानुनले रोक्छ । कसरि धित मार्ने त देउसी भैलोको ? ठूलो हल लिएर दिनभरि गाउने,...
ईटालीको मिलानमा दशैं त कस्तो झुर !
अक्टोबर ८, २०१४
महिन्दो वाईवा / ईटाली नेपाल मितेरी मन्चको यो वर्षको दशैं कार्यक्रम साह्रै झुर भो । अन्य वर्षभन्दा धेरै पैसा उठाइयो । न रमाइलो भो । न नाचगान नै गर्न पाइयो । के हो यस्तो कार्यक्रम ? एक...
यसरि मनाए नेपालीले विश्वभरि दशैं
अक्टोबर ४, २०१४
(मुकुन्द पौडेलको परिवार । मिलान, इटाली) विश्वभरिका नेपालीहरुले हिजो आफ्नो चाड दशैं धुमधामले मनाए । सक्नेले बिदा लिए । नसक्ने वा नपाउनेले साँझ घर फर्केपछिपनि मनाए । केहिले मनाउँदै छन् । दशैं मनाउनुहुन्न भन्दै केहि जनजाति अभियन्ताहरुले...
विश्वबिध्यालयनै हापी दिएर जापानमा दशैं
अक्टोबर ३, २०१४
● अम्बारिस पोख्रेल / होक्कैदो, जापान होक्कैदो (होक्कैदो) विश्व बिध्यालयका १९ जना बिधार्थी र पोस्ट डक्टरेट फेलोहरुले एक महिना अगाडी नै विश्व बिध्यालयको हल अनुबन्ध गरेका थियौं, यहि दशैं मनाउन । आज बिहान ९.३० देखि साँझ ८.३०...
हिन्दूहरुको दशैं, हामी खेल्छौ किर्पा
अक्टोबर १, २०१४
महिन्दो वाइबा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सेमजोङ गाविसमा विशेष गरी तामाङ जातिको बाहुल्यता छ । यहाँ युगौदेखिको बाक्लो बस्ती छ । नेपालको पश्चिमी तामाङ भनेर चिनिने धादिङका तामाङहरु अन्य क्षेत्रका भन्दा अलिकति पृथक छन् । ति...
तामाङ खुशी हुँदा बाहुन किन रिसाउने र बाहुन खुशी हुँदा तामाङ किन रिसाउने ?
सेप्टेम्बर २५, २०१४
रमेश ‘रोदीत‘ तामाङ नेपाली तिहारमा गाई पशु भित्र्याएर देशको माटोको सुगन्ध संस्कृति बढालेर भारतीय दिपावली भन्नु हुँदैन । तिहार नै भन्नु पर्छ । बहुधार्मिक राष्ट्रको यदि सम्पुर्ण नेपालीको राष्ट्रीय चाडबाड हो भने धार्मिक रङ फेर्नु आवश्यक होला...
बडा दशैको शुभकामना !
दशै सबैको हुन सकोस् । सबैमा उमंग, खुशि र रमाइलो दिन सकोस् ! दशैंको पर्वका बेला कसैको घर रित्तै, कसैको पेट रित्तै नहोस् । त्यो नभए त्यसकालागि सबै जागरुक बनुन् ! सबैलाई बडा दशैंको शुभकामना ! ...